Mon, Jul 6, 2020 at 5:53am
प्रेम, विवाह, सेक्सलगायतका विषयमा यसरी खुलिन् प्रतिशा रिजाल
काठमाडौँ, २८ असार । डलिङमा स्थापित हुने धुनमा लागेकी प्रतिशा रिजाल २०५५ सालमा मोरङको विराटचोकमा जन्मिएकी हुन् । उमेरले २० पुगेकी यी सुन्दरी हाल बीएड अध्ययनरत छिन् । पढाइ र मोडलिङलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेकी प्रतिशा विभिन्न फेसन सोमा पनि सहभागी हुँदै आएकी छन् । उनी मोडलिङ पेसामा नै ‘रोल मोडल’ बन्न चाहन्छिन् । कोरियोग्राफीमा समेत प्रशस्त अनुभव सम्हालिसकेकी उनी नायिका केकी..
पत्रकारसँग भिड्दै बलिउड नायिका कंगना रणावत
मुम्बइ, २७ असार । बलिउड नायिका कंगना रणावत पछिल्लो समय विभिन्न विवादका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । केहि समयदेखि उनी भारतीय चलचित्र पत्रकासँगको विवादले चर्चामा छिन् । आइतबार फिल्म 'जजमेन्टल हे क्या' को गीत सार्वजनिक गर्न मिडियासँगको कुराकानीमा कंगनाले जस्टिन नामक पत्रकारसँग साडे छ मिनेट विवाद गरिन्। उक्त पत्रकारले कंगनालाई उग्रराष्ट्रवादी भएकाले फिल्म मणिकर्णिका बनाएकी हुन् भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । मणिकर्णिका द क्विन अफ झाँसीु पाकिस्तानमा रिलिज गरिएको..
मिल्यो छविराज र शिल्पाको झगडा
काठमाडौं, २६ असार । फिल्म निर्माता छविराज ओझा र नायिका तथा मोडल शिल्पा पोखरेलकाे मेलमिलाप भएकाे छ । उनीहरूले अब एकअर्कालाई आरोप नलगाउने सहमति गर्दै विवाद साम्य पारेका हुन् । दुवैले अब एकले अर्कालाई पारिवारिक र व्यक्तिगत विषयमा आक्षेप नलगाउने सहमति गरेका छन् । बिहीवार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका छविराज र शिल्पाले प्रहरीसामु यस्तो सहमति गरेका हुन् । शिल्पाले आफू घरेलु हिंसामा..
नेपालीको भान्सा शुद्ध र खानेकुरा विषादिरहित हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, २६ असार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँले आयातीत तरकारी र फलफूलका विषादि जाँचका सम्बन्धमा भारतीय दूतावासबाट आएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नदिइएका विषयमा खोजी गरिने बताउनुभएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनः संरचना’ विषयको राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालीको भान्सा शुद्ध र खानेकुरा विषादिरहित हुनुपर्ने उद्देश्यले सरकारले जाँच शुरु गरेको..
भद्रपुर, २६ असार भारतीय सौन्दर्य प्रतियोगितामा नेपाली चेली निकिता थापामगरले ‘मिस टीन भारत’ को उपाधि जितेकी छिन् । झापा मेचीनगर नगरपालिका–५ नकलबन्दाकी १७ वर्षीया थापाले प्रतियोगितामा भारतका ३० प्रान्तबाट सहभागी बनेका सबैलाई उछिनेर विजेता बनेकी हुन् । यही असार २० गते शुक्रबार भारतको राजधानी दिल्लीमा आयोजना भएको ‘मिस टीन भारत’ विजेता थापा निशा थापा र पदम थापामगरको दुई छोरीमध्ये जेठी सन्तान हुन्..
छवि ओझाविरुद्ध नायिका शिल्पा पोखरेलको उजुरी
बुधबार, आषाढ २५, २०७६ साल
काठमाडौँ, २५ असार अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले छविराज ओझाविरुद्ध उजुरी दिएकी छन् । उनले घरेलु हिंसा भएको भन्दै शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी हुन् । शिल्पाले बुधबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएको परिसरका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । ‘शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै अभिनेत्री शिल्पाले उजुरी दिएकी छन् । आज बुधबार छलफलका लागि उनीहरू दुवैलाई बोलाएका छौं,’ डीएसपी बोगटीले भने..
यी हुन् इन्गेजमेन्ट भएर विवाह नभएका बलिउड सेलिब्रेटी
मुम्बई। चलचित्र जगतमा सेलिब्रेटीहरूका लागि इन्गेजमेन्ट, विवाह र डिभोर्स सामान्य विषय हुन् । हलिउड, बलिउड र कलिउडमा पनि अभिनेता अभिनेत्रीको सम्बन्धमा समस्याहरु आउने गरेका छन् । बलिउडमा प्रेम सम्बन्धलाई विवाहसम्म लैजान केही सेलिब्रेटी असफल भएका केही उदाहरणहरु छन् । जसले विवाहका लागि इन्जेमेन्ट त गरे तर विवाह हुन सकेनन् । यस्ता केही सेलिब्रेटीका बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दै छौं । सलमान खान..
रेखा थापा पुन:विवाह गर्ने, सार्वजनिक गरिन आफ्नो बिहेको समय
काठमाडौँ, २४ असार रेखा थापा कुनै समयकी निकै चर्चित र व्यस्त नायिका हुन् । कुनै समयमा उनको नामले मात्र पनि चलचित्र सफल हुने गर्थे । हुन उनी सदावहार चर्चामा रहने नायिकामा पर्छिन् । केहीबर्ष देखि भने लगातार उनका चलचित्रहरु असफल भैरहेका छन् । पछिल्लो समयमा रेखा चलचित्रमा भन्दापनि राजनीति क्षेत्रमा बढी संलग्न छिन् । यस्तै छवि ओझसँग केहीबर्ष अघि उनको डिभोर्स भएको थियो..
अश्लिल गीत निकालेको भन्दै र्‍यापर हनी सिंहविरुद्ध मुद्दा (भिडियाेसहित)
काठमाडौँ, २४ असार भारतीय र्‍यापर हनी सिंहविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । भर्खरै नयाँ गीत ‘मखना’मा सार्वजनिक गरेका हनीलाई महिलामाथि आपक्तिजनक र अश्लिल शब्द प्रयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको हो । राज्य महिला आयोगले पञ्जाब पुलिस चौकीमा मुद्दा दर्ता गरेको भारतीय मिडियाले लेखेको छ । उनीहरुको मुद्दा अनुसार हनी सिंह र भुषण कुमारको विरुद्ध गीतको माध्यमबाट अश्लिलता फैनाएको र धम्क्याएका मुद्दा..
एसईई पास भएको खुसीयालीमा करिष्माले दिइन् ग्रान्ड पार्टी
काठमाडौं, २४ असार । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका करिष्मा मानन्धरले एसईईमा पास भएको खुसीयालीमा पार्टी दिएकी छिन्। भर्खरै एसईईमा बि प्लस जिपिए पास गरेकी अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरले सो खुसी सबै माँझ साट्दै शनिबार ज्ञानेश्वरको एटिक रेष्टुरेन्टमा पार्टी दिएकी हुन्। उनले सँगै पढेका स्कूले साथी भाई र स्कूलका गुरुहरु तथा फिल्मक्षेत्रका सहकर्मीलाई पार्टी दिएकी थिइन्। पार्टीमा चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराई, वितरक..
प्रियंकाले स्विमिङ पुलकाे डिलमा बिकनी पाेज दिएको तस्विर 'भाईरल'
सोमबार, आषाढ २३, २०७६ साल
एजेन्सी, २३ असार बलिउड नायिका प्रियंका चोपडा अहिले आफ्ना श्रीमान निक जोन्ससंग छुट्टी मनाउदैछिन् । अहिले उनीहरु इटलीको टस्कनी पुगेका छन् । प्रियंकाले हालै मात्रै केही बिकीनी तस्विर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि उनको चर्चा फेरि बढेको छ । बिकीनीमा प्रियंका निकै हट देखिएकी छिन् । हातमा वाइनको गिलास लिएकी प्रियंकाले स्वीमिङ पुलको डिलमा बसेर भिन्नि पोज दिएकी छिन् । पछिल्लो समय हलिउड..
अभिनेत्री स्वारा भास्करको ब्रेकअपको कारण बाहिरियो
काठमाडौँ, २३ असार । फिल्मभन्दा ज्यादा आफ्नो बयानका कारण चर्चामा आइरहने अभिनेत्री स्वारा भास्कर अहिले भने सम्बन्धका कारण चर्चामा छिन् । स्वारा पछिल्लो चार वर्षदेखि लेखक हिमांशु शर्मासँग प्रेममा थिइन् । तर, केही दिनअघि खबर आएको थियो कि उनीहरूको ब्रेकअप भएको छ । अहिले ब्रेकअपको कारण पनि बाहिर आएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार पाँच वर्षदेखि उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा थिए । स्वाराले..
NTV का ‘मेरी बास्सै’ र ‘भद्रगोल’ सर्वाधिक लोकप्रिय : अध्ययन
काठमाडौँ, २२ असार सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल नामक संस्थाले हालै गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल टेलिभिजन मुलुककै लोकप्रिय टेलिभिजनका रुपमा स्थापित भएको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार विशेषगरी हास्य टेलिशृङ्खला ‘मेरी बास्सै’ र ‘भद्रगोल’ दर्शकले अत्यधिक रुचाएको पाइएको हो । एनटीभीबाट प्रशारण भैरहेका यी दुई कार्यक्रममा दर्शकले विशेष रुची देखाएका हुन् । विशेषगरी हाँस्य व्यँग्य विधामा यी दुई कार्यक्रम अब्बल मानिन्छन् । त्यसैगरी टेलिभिजन हेर्ने सङ्ख्यामध्ये ८० प्रतिशत मानिसले नेपाली..
चर्चित बलिउड नायिकाले विवाहनै नगरी छोरी जन्माएपछि भारतमा हँगामा !
एजेन्सी, २२ असार एक चर्चित नायिकाले विवाह नै नगरी छोरी जन्माएको विषयले अहिले भारतभर चर्चा पाइरहेको छ । अविवाहित नायिकाले आफूसँग तीन वर्षकी छोरी रहेको बताएपछि धेरैलाई अचम्म लागेको छ । ती नायिका हुनु, माही गिल । आफू अविवाहित रहेरै छोरीलाई जन्म दिएको र अब भने विवाह गर्ने चोच बनाएको उनले बताएकी छन् । नवभारत टाइम्समा हालै प्रकाशित उनको अन्तर्वार्तामा बच्चा आफ्ना प्रेमीको..
तीन वर्ष लभ थियो तर अहिले छैनः गायिका मनु
काठमाडौँ, २२ असार । गायिका मनु थामी तीन वर्षदेखि गीत संगित क्षेत्रमा संघर्ष गर्दैछिन् । संगितका डुबेर अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेकी मनु गहिराईमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘भर्खर तैरदै छु । गहिराइमा पुग्नु त अझै समय लाग्छ । उनले हालसम्म करिव ३० वटा गीत गाइसकेकी छिन् । त्यसमध्ये सुनैको सिरिमिरी गीत आफूलाई बहुत मनपर्ने उनले बताइन..
आइफा अवार्ड नेपालमै हुन्छ, कसैकाे अनधिकृत निर्देशनले राेकिदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकाडेमी अवार्ड 'आइफा' नेपालमै हुने बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आइफा अवार्ड नेपालमा गर्न वार्ता चलिरहेकाले कसैले अनधिकृत निर्देशन दिँदैमा नरोकिने स्पष्ट पारे। ‘मन्त्रिपरिषद्ले न्यून लागतमा धेरै प्रतिफल पाउने गरी आइपफा अवार्ड गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले बजेट छुट्याउने..
काठमाडौँ, २० असार । ज्योति मीठो स्वरकी धनी गायिका पनि हुन् । उनले ‘जिम्मल बाउकी छोरी’ जस्ता चर्चित गीतबाट उहिल्यै आफ्नो परिचय स्थापित गरेकी हुन् । तर, ज्योति स्टन्टबाज पनि हुन् भनेर भनिरहन पर्दैन । उनी गीतबाट मात्र होइन, म्युजिक भिडियोमा पनि अनेक हर्कत गरेर चर्चामा आउँछिन् । कन्सर्टमा युवाहरू ज्योतिको गीत सुन्न होइन, फेसन हेर्न आउँछन् भन्ने आरोप छ । यो..
अभिनेत्रीको रेखा लिम्बूको रोजाइ अनमोल र आशिरमान
काठमाडौँ, २० असार । अहिलेको हिट अभिनेता अनमोल हुन् । मलाई उनको व्यक्तित्व नै ‘हिरोइजम’ लाग्छ । अरू अभिनेताको व्यक्तित्व सामान्य हुन्छ । तर, अनमोलको विशेष व्यक्तित्व देखिन्छ । उनको लुक्स मलाई एकदम सही लाग्छ । उनी नयाँ पुस्ताको सुपर स्टार हुन् । अवश्य पनि उनीसँग स्क्रिन सेयर गर्ने रहर छ । अर्का आकर्षक व्यक्तित्व भएका अभिनेता आशिरमान देशराज हुन् । मलाई..
गायक राजेशपायललाई दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर पुरस्कार
खोटाङ, १८ असार राई ईज किङ’को उपाधि प्राप्त गायक राजेशपायल राईलाई रु एक लाख राशिको पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ । खोटाङको बुइपामा जन्मनुभएका बहुमुखी गायक राजेशपायलाई गृहनगर दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आज नगदसहित सम्मान गरेको हो । गायनको माध्यमबाट नगरपालिका तथा जिल्लालाई देश÷बिदेमा चिनाएको भन्दै गायक राजेशपायललाई उक्त राशिको ‘नगर पुरस्कार’ प्रदान गरिएको नगरप्रमुख दिपनारायण रिजालले बताउनुभयो । गायक राजेशपायललाई आज आयोजना..
किन अरेबियन महिलारु हुन्छन यति सुन्दर ? यस्तो छ रहस्य
एजेन्सी, १८ असार सुन्दरताको कुरा गर्दा अरबियन महिलाहरुको प्रसंग जोड्ने गरिन्छ । हुनपनि बान्की मिलेको अनुहार, छालाको चमक, आँखाको तेज, मुलायम एंव रसिलो ओंठ आदिले उनीहरुको सौन्दर्य खुल्ने गर्छ । सवैले स्विकारेका छन् कि, अरेबियन महिलाहरुको छाला अन्य देशका महिलाहरुको तुलनामा धेरै सुन्दर र स्वस्थ्य हुन्छ । यी महिलाहरुको छाला मात्र हैन कपाल पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ । अरेबियन महिलाहरु ठुला आँखा र..
भारतीय फिल्म अवार्ड आईफा आयोजना गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
काठमाडौं, १८ असार चौतर्फी विरोधपछि आईफा अवार्ड नेपालमा गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले यसवर्षको आईफा अवार्ड नेपालमा नहुने पुष्टि गरे । ‘यो वर्ष नहुने नै भयो, अब एक/दुई वर्षपछि पूर्वाधारमा हामी सक्षम भयौं भने पुन: आयोजनाको सम्भावना रहन्छ’ उनले भने । सरकारले असार ८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भारतीय फिल्म अवार्ड आईफा नेपालमा आयोजना..
दर्शकले आस मार्न नपरोस्
काठमाडौँ, १८ असार । नायिका वर्षा राउतले दर्शकलाई निराश हुन नदिने बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन् ‘ दर्शकको आफ्नै किसिमका अपेक्षा छन् । दर्शकलाई निराश हुन भने दिन्नँ । अहिले गरिरहेको कामभन्दा राम्रै काम गर्न पाऊँ । दर्शकको आस मार्न नपरोस् ।’ कलाकार भएपछि जस्तोसुकै पात्रमा पनि भिज्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नयाँ पत्रिकासँग भनेकी छिन् ‘मलाई गर्न मन..
भारतीय आइफा अवार्ड नेपालमा नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन
काठमाडौँ, १८ असार । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) नेपालमा नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइफा अवार्ड गर्दा नेपाललाई आर्थिक भार धेरै पर्ने समितिको मंगलबारको बैठकले ठहर गरेको छ । समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भर्खर द्वन्द्व खेपेर आएको देशमा अवार्डले आर्थिक भार थोपर्ने भएकाले फाइदाजनक नभएको ठहर समितिले गरेको बताइन् । ‘नेपालले ठूलो आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने..
इन्डियन आइडलबाट सधैँका लागि निकालिए अनु मलिक
नयाँ दिल्ली, १७ असार । गत वर्ष मीटू अभियानअन्तर्गत यौन शोषणको आरोप लागेका बलिउडका संगीतकार अनु मलिकलाई रियालिटी शो इन्डियन आइडलबाट निकालिएको थियो। तर सीजन ११ मा फेरि अनु मलिकलाई लिने चर्चा चलेको थियो। त्याे खबर निकै फैलिएपछि अब सोनी च्यानलले अनुलाई पूरै निकालेको सूत्रहरूले बताएकाे छ। यस विषयमा अनु मलिकलाई प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘यस विषयमा टिप्पणी गर्न सक्दिनँ । इनिडयन आइडलको निर्णायक बन्ने..
एड गुरु पौडेललाई चलचित्र विकास वोर्डको विशिष्ट सम्मान
काठमाडौं, १७ असार । नेपाल चलचित्र विकास वोर्डले एड गुरु निर्मल राज पौडेललाई फिचर मुभी र विज्ञापनका क्षेत्रमा पु ¥याएको योगदानको उच्च मूल्याँकन गर्दे सम्मानित गरेको छ । लामो समयदेखि विज्ञापनको क्षेत्रलाई आफ्नो कर्म बनाएर अघि बढिरहनुभएका पौडेल एक कार्यक्रमकाबीच सम्मानित हुनुभएको हो । नेपाली विज्ञापन क्षेत्रमा पौडेल विगत ३ दशकदेखि क्रियाशिल रहँदै आउनुभएको छ । नेपाल विज्ञापन सघं को पूुर्व अध्यक्ष रहनुभएका..
इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड आइफा, नेपालमा यसरी गरिदैछ खर्चको लेखाजोखा
काठमाडौँ, १६ असार । नेपाल पर्यटन बोर्डले सरकारी तथा निजी संस्थाको खर्चमा इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड–२०१९(आइफा) गर्ने योजना बनाएको छ । तर, खर्च गर्न भनिएका निकायलाई भने यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी छैन । बोर्डका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीका अनुसार आइफामा सहभागी कलाकारका लागि नेपालले क्यास (रकम) र काइन्ड (वस्तु) गरी दुई तवरले सहयोग गर्नेछ । क्यासअन्तर्गत नेपालले ४ मिलियन..
म्युजिक भिडियाेमा जम्दै टिकटक क्वीन्स्, यस्तो छ ट्वीन्नी गल्र्सको नयाँ म्युजिक भिडियो
काठमाडाैं, १५ असार । टिकटक क्वीन ट्वीन्स प्रिज्मा खतिवडा र प्रिन्सी खतिवडा अब माेडलिङमा छाउन थालेका छन्। टिकटकमा ट्वीन्नी गल्र्सका नामले परिचित दिदी बहिनी प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडा पछिल्लाे समय माेडलिङमा जमेका छन्। प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडासँगै टिकटकका अर्का हिट ट्वीन्स दीपा श्रेष्ठ र दमन्ता श्रेष्ठको अभिनय रहेकाे ‘अमिलो निबुवा’ गीतकाे म्युजिक भिडियाे सार्वजनिक भएको छ। उक्त गीतकाे अभिनयमा ट्वीन्नी गल्र्स प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडा र दीपा..
आईफालाई ४४ करोड रुपैयाँ दिने बारे अर्थमन्त्री नै बेखबर
असार १५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री यूबराज खतिवडाले निजी क्षेत्रको भारतीय इन्टरनेसनल इन्डिया फिःमस अवार्ड समारोहलाई ४४ करोड दिने बारे अर्थमन्त्रीनै बेखवर रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित ‘परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा राष्ट्रिय संवादमा नेपाल सरकारले ‘प्रायोजन’ गर्ने र यसका लागि तत्काल ४४ करोड रुपैयाँ दिनेबारे अर्थ मन्त्रालय ‘बेखबर’ रहेको जानकारी दिएका हुन् । आईफालाई पैसा दिनेबारेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा आएको छैन ।..
निशुको प्रेममा किशोर र स्मारिकाको अभिनय (हेर्नुहोस् भिडिओ)
काठमाडौँ, १५ असार । गायिका निशु ढकालको नयाँ गीत ‘मेरो प्रेम’ सार्वजनिक भएको छ । ढकालको स्वर रहेको गीतको भिडिओ युटुबमार्फत सार्वजनिक भएको हो । गीतमा शब्द तथा संगीत नविन के तिमल्सिनाको रहेको छ । भिडिओलाई सुनिल शाहीले छायांकन गरेका छन् । भिडिओलाई सम्पादन तथा निर्देशन तिमल्सिनाले नै गरेका छन् । भिडिओमा किशोर गौतम र स्मारिका ढकालले अभिनय गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडिओ ..
'लिपिस्टिकको रंङ छनोटका आधारमा खुल्छ महिलाको चरित्र'
काठमाडौँ, १४ असार अमेरिकामा भर्खरै गरिएको रिसर्चका अनुसार लिपिस्टिकको रंङ छनोटका आधारमा महिलाको चरित्र भन्न सकिने देखाएको छ । अहिलेका महिलाहरु मात्र हैन आज भन्दा सदियौँ अगाडीका महिलाहरु पनि मेकअप गर्ने गर्दथे । धेरै महिलाले घरबाट कतै जान पर्यो भने अनिवार्य रुपमा लिपिस्टिक लगाउने गर्छन् । मेकअपमा मलिपिस्टिक महिलाहरुको लागि नभए नहुने एक मात्र चिज हो । धेरै महिलाहरुको मेकअपपछिको सौन्दर्यता भनेको नै लिपिस्टिक हो..
Results 913: You are at page 11 of 31